सोमबार नेप्से परिसूचक ३२.६७ अंकले ओरालो, जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने उच्च वृद्धि | News Polar
सोमबार नेप्से परिसूचक ३२.६७ अंकले ओरालो, जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने उच्च वृद्धि
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक ३२.६७ अंक घटेर बन्द भएको छ । यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा १.२४ प्रतिशत तल झरेको हो ।
सोमबार उच्च अंकले घटेको बजारमा ४३ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ । यीमध्ये पनि आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।यस दिन बजारमा उच्च मूल्य वृद्धि हुनेमा अघिकांश जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य ६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
यसदिन नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको ९.९३ प्रतिशत, अपर तामाकोशीको ९.८३ प्रतिशत, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको ९.६७ प्रतिशत, शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको ९.६३ प्रतिशत, सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्डको ९.५९ प्रतिशत र खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ९.४० प्रतिशतले शेयरमूल्य बढेको छ ।
सोमबार १२ वटा समूहगत परिसूचक मध्य जलविद्युतको २.२६ प्रतिशत र अन्य समूहको १.२९ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १.९२ प्रतिशत अर्थात् ९.२२ अंक घटेर ४७०.३६ विन्दुमा झरेको छ ।
यो दिन २०७ वटा कम्पनीको रू. ८ अर्ब ४० करोड ६३ लाख १० हजार बराबरको २ करोड १६ लाख १४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा यो दिन एनआईसी एशिया बैंकले ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ३८ करोड २४ लाख ७५ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
सोमबार बैंकिङ, व्यापारिक र विकास बैंक समूहले सर्वाधिक गुमाएका छन् । सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र मेगा बैंकको शेयरमूल्य यो दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रतिकित्ता रू. १६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २७४, सिभिल बैंकको प्रतिकित्ता रू. १४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २४९ र मेगा बैंकको प्रतिकित्ता रू. १७ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३१० कायम भएको हो । यो दिन नबिल इक्वीटी फण्डको इकाई मूल्य पनि ५.०२ प्रतिशत घटेर प्रति इकाई रू. १२.११ कायम भएको छ ।
गत साताको सोमबारदेखि निरन्तर बढेको बजार यो साताको सोमबार नै आएर घटेको हो । लगातार पाँच कारोबार दिन बढेको बजारबाट सोमबार भने लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गरेका छन् । कारोबारमा लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गर्दै अघि बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको जानकारहरु बताउछन् । बजार निरन्तर बढ्नु भन्दा करेक्सन हुँदै बढ्दा बजारले सहि गति लिने विश्लेषण गरिएको छ ।
# नाफा बुक # आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी # सोमबार नेप्से परिसूचक # नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक # जलविद्युत् कम्पनी
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७, १६:२६:४८